Cupola အတွက်ဖုန်မှုန့် remover ၏ရွေးချယ်ရေး China Manufacturer
Cupola အတွက်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး၏ရွေးချယ်ရေး,Cupola ဖုန်ကောက်ခံရေး,ရောင်းမည်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Cupola အတွက်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး၏ရွေးချယ်ရေး,Cupola ဖုန်ကောက်ခံရေး,ရောင်းမည်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > Cupola အတွက်ဖုန်မှုန့် remover ၏ရွေးချယ်ရေး
 Cupola အတွက်ဖုန်မှုန့် remover ၏ရွေးချယ်ရေး
foundry စက်ရုံအတွက် cupola ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ cupola flue ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရွေးချယ်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:
အဆိုပါ cupola ၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ရွေးချယ်ရေးအဓိကအားဖြင့်မီးဖို၏စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သော flue ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်, Coke နှင့်သံ၏အချိုးအစား, ပစ္စည်း၏အမြင့်နှင့်ယူနစ်လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး၏ကြီးမားသောပွောငျးခွငျးအကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံသည်။ မရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမီးဖြစ်ပြီး, အပူချိန်ကိုပိုပြီးသံချစ်ပ်များနှင့်အောက်ဆိုဒ်အရေခွံသွန်းသောသံသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအတွက်ရှိပါသည်တဲ့အခါမှာယေဘုယျအားဖြင့် 300 ~ 500 ကို C အခါယေဘုယျခုနှစ်, flue ဓါတ်ငွေ့၏အပူချိန်စင်တီဂရိတ် 100 ခန့် ~ 200 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးရေး၏အဆုံးကနေပေါက်ကွဲမှုဇာတ်စင်၏ရပ်နားရန်, ပစ္စည်းအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်မီးထ, အပူချိန်သိသိသာသာမြင့်တက်, မီးလုံးဝ 200 ~ 900 ဒီဂရီ C တွင် reburning သကဲ့သို့, မီးလုံးဝ ~ 800 150 မှာ reburning မမူ အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်လောင်ကျွမ်း ~ 600 100 ဦးဖြစ်ပြီး, ယင်းမှုတ်တံ၏မှိတ် 900 ~ 1250 စင်တီဂရိတ်ဖြစ်တော်မူ၏ မီးဖိုထဲ ~ 800 စင်တီဂရိတ် 600 ဖြစ်၏ အဆိုပါစွမ်းရည်ကြီးမားသည်။ အဆိုပါ cupola မှာတော့မီးဖိုဓာတ်ငွေ့ကိုပိုမို CO အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်နှင့်အပူချိန်စင်တီဂရိတ် 800 ~ 1000 ဒီဂရီရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် reburning အခါ, နှင့် pulverized ကျောက်မီးသွေး cupola ၏ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်ယေဘုယျအားဖြင့် ~ 1000 800, အမြဲပိုမိုမြင့်မားသည်။ cupola flue ဓာတ်ငွေ့အထွေထွေအခြေအနေအရ, cupola deduster အဆိုပါ cupola flue ဓါတ်ငွေ့များ၏သန့်စင်ပြီးမြောက်ရန်အောက်ပါဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများချမှတ်။
1. ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနေတဲ့မူလတန်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ cupola deduster ဖြစ်ပါတယ်။ မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုထက်ပို 70% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံ 800Pa ထက်လျော့နည်းသည်။ မြေမှုန့် remover သည့်လှည့် Airflow အားဖြင့်ထုတ်လုပ် flue ဓာတ်ငွေ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုန်များနှင့် centrifugal အင်အားသုံးထံမှအမှုန်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ မြေမှုန့်မှုန်မြေမှုန့်စီးဆင်းမှုကနေကွဲကွာကြသည်, ထိုမြေမှုန့်ရိနာစွဲကနေဆေးရုံကဆင်းသည်။ အဆိုပါဆေးကြော flue ဓာတ်ငွေ့ cupola ၏နှစ်ခုဇာတ်စင်ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အအေးပစ္စည်းကိရိယာများသို့ဆင်းသည်။
2. အေး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်နိယာမ: အအေးအထက် box ကိုအလယ်တန်း box ကိုများနှင့်ပြာမှုန် Hopper တွေလည်းတက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ cupola ၏ flue ဓာတ်ငွေ့အဓိကပိုက်၏အချင်းမှတဆင့်သေးငယ်တဲ့ပိုက်တစ်အရေအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပုဒ်မပိုကြီးဖြစ်လာသည်လေတိုက်နှုန်းနှေးကွေးနှင့်လေတိုက်မှုတ်တံအပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် axial ပန်ကာဒခိုင်မာတဲ့အအေးလေဖြင့်ပူးတွဲနှင့်လည်းအခြေချများ၏အခန်းကဏ္ဍသည်။ အေးပြီးနောက် flue ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှတဆင့် cupola deduster သို့ညှစ်နေသည်။
3, cupola ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း: မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, cupola ၏အငွေ့သန့်ရှင်းရေးစနစ်အိတ် filter ကို၏လျှောက်လွှာလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုထက်ပို 99% ဖြစ်ပြီး, မြေမှုန့်ထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု 50mg / m3 ကိုအောက်တွင်တည်ငြိမ်နိုင်ပါသည်။ (ဥပမာစသည်တို့ကိုဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, အေး, အဖြစ်) ကိုအိတ် filter ကိုရှေ့တော်၌ထိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်အအေးပစ္စည်းကိရိယာများအိတ် filter ကို၏ wear ပေါ့နိုင်ပါတယ်။
cupola deduster ၏စစ်ထုတ်ပစ္စည်း polyester filter ကိုပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်သောအခါ, filtration မြန်နှုန်း 1.0m / မိနစ်အကြောင်းပါ။ ဖန်ဖိုင်ဘာ filter ကိုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဥပမာ, ပု filtration မြန်နှုန်း 0.5m / မိနစ်အကြောင်းပါ။
ZC စက်မှု rotary ပြန်ထိုးနှက်ပြားချပ်ချပ်အိတ် filter ကို
ယင်း၏အလုပ်လုပ်နိယာမ, filtering ကိုအခြေအနေများနှင့်ဖုန်မှုန့်ဝန်ကိုထမ်းရွက်ဓာတ်ငွေ့ tangential ဦးတည်ချက်အတွက် filter ကိုအခန်းထဲက၏အထက်အာကာသရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါကိရိယာကစုပ်ယူနှင့်ထဲသို့ဆင်းသောကြီးမားသောအမှုန်များနှင့်ခဲမြေမှုန့်အမှုန်ဟာ filter ကိုအခန်းထဲကအိတ်များ၏ရှင်းလင်းရေးတလျှောက်လူစုခွဲကြသည်, နှင့်သန့်ရှင်းသောလေထုဟာ filter ကိုအိတ်ကနေတဆင့်အိတ်အုတ်ရိုးကိုအလေးအိတ်အုတ်ရိုးကိုကောက်ယူသည်၏သေးငယ်တဲ့အမှုန် လေထု။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Cupola အတွက်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး၏ရွေးချယ်ရေး , Cupola ဖုန်ကောက်ခံရေး , ရောင်းမည်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , EAF ဖုန်ဖယ်ရှားရေး၏စီးရီး , အထည်အိတ်ဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ဈေးနှုန်း , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , ဘုတ်အဖွဲ့ဖုန်ကောက်ခံရေးဆေးလိပ်သောက်